Dhakhtarkii ka caawiyay CIA-da inay helaan Cusama Bin Laden - BBC News Somali
Image caption Dr Afridi ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay
Image caption Muddo 10 sano ah ayuu Bin laden dhuumaaleysanayay
In kastoo dhakhtarkaasi gudaha Mareykanka looga aqoonsan yahay halyay geesi ah, dadka reer Pakistan intooda badan waxay u arkaan khaa'in waji gebax ku riday dalkiisa. Ciidamada Mareykanka ayay u suurtagashay in ay yimaadaan gudaha dalka Pakistan oo ay dilaan Cusama Bin Laden oo waliba ay meydkiisa qaataan iyaga oo aan wax dhibaato ah arrintaasi kala kulmin.
Waxaa dilka Bin Laden ka dhashay su'aal ah milatariga dalkaasi Pakistan miyuu wax ka ogaa joogitaanka Bin Laden ee gudaha dalkaasi Pakistan.
Dr Afridi ayaa ah dhakhtar ka hawlgali jiray degmada uu qabaa'ilka maamulo ee Khaybar, waxa uuna ahaa madaxa adeegyada caafimaad ee mas'uulka ka ahaa mashruucyo tallaal oo Mareykanka uu maalgeliyay.
Dr Afridi ayaa xabsiga la dhigay 23-kii May 2011, waa muddo 20 maalmood ah ka dib markii la dilay Bin Laden. Waxaa la rumeysan yahay in xilligaasi uu ku jiray da'da afartameeyada.
Wax badan lagama oga nolashiisa gaarka ah balse waxaa la ogyahay in uu ka soo jeedo qoys ladan isla markaana uu ka soo qalin jebiyay mac'hadka caafimaadka ee Kheybar sanadkii 1990. Qoyskiisa ayaa dhuumaaleysi ku jiray tan iyo markii Dr Afridi la xiray, waxayna ka baqayeen in kooxaha mintidiinta ahi ay soo weeraraan.
Image caption Ciidammada Pakistan iyo shacab ku sugan gurigii lagu dilay Bin laden 2011-kii
Inasktoo mas'uuliyiinta reer Pakistan ay aad uga caroodeen waxa ay ku tilmaameen xad gudub lagu sameeyay madax-bannaanidooda, haddana sirdoonka Pakistan ayaa qirtay in aysan waxba ka ogayn in Cusaama Bin Laden oo ahaa hoggaamiyaha Al-Qaacidda uu halkaasi ku noolaa muddo sanado ah.
Maxkamadeynta Dr Afridi ayaa loo cuskanayaa sharci gooni u ah deegaannada qabaa'ilka uu ka taliyo ee ku yaal xudduudda dalalka Pakistan iyo Afqaanistaan.
Maxkamadaha deegaanadan oo ay qabaa'ilku maamulaan ayaa waxaa guddoominaya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda waxaana gacan siinaya odeyaal dhaqameedyada qabaa'ilka. Hannaankan maxkamadeed ayaa la sheegayaa in uu aad u baal marsan yahay hannaanka caddaaladda ee dalkaasi.
Image caption Guriga uu ku noolaa Bin Laden ka hor inta aan la duminin
Balse saandkii hore ayaa la isku daray maamulka degaannada qabaa'ilka maamulo iyo maamulka dowlaiga ah ee gobolka Kheybar, taa oo ka dhigan in dhammaan kiisaskii ay dhageysanayeen maxkamadaha qabaa'ilka loo soo wareejiyo maxkamadaha caadiga ah ee dalkaasi Pakistan.
2 Maajo 2016